कस्मिक क्रिस्टल | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
तपाईं Jewels र बहुमूल्य रत्न को रुचाउनु हो भने, कस्मिक क्रिस्टल तपाईं लागि स्लट खेल हो. यो स्लट साइट निःशुल्क बोनस खेल पाँच रील र पचास ठूलो शर्त-रेखा छ. यो तपाईं लाभ उठाउन सक्छौं विजेता संयोजन को एक ठूलो संख्या लागि बाटो बनाउँछ. यो विषय कस्मिक संसारबाट विभिन्न रंगीन क्रिस्टल आधारित छ. को रील को पृष्ठभूमि राम्रो जादुई देखिन्छ कि गुलाबी र बैजनी महत्तव संग स्पेस एक scintillating दृश्य छ. तपाईं पनि ग्रह देखि बढ्दो twinkling एनिमेटेड तारा र कुहिरो केही क्रमबद्ध नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ. पृष्ठभूमि संगीत स्पा प्रकृति को छ र यसको धुनहरू गर्न मनन जस्तै महसुस. उच्च परिभाषा ग्राफिक्स तपाईं तत्काल खेलबाट आदी प्राप्त बनाउँछ. र त्यहाँ सुविधाहरू प्रशस्त तपाईं पनि ठूलो जीत मदत छन्. यो सट्टेबाजी 50p एक स्पिन सुरु र तपाईं £ 100 को अधिकतम यसलाई हुर्काउन सक्छन्.
ब्रह्मांडीय क्रिस्टल को विकासकर्ताको बारेमा
यो अद्भुत र जादुई स्लट साइट निःशुल्क बोनस खेल फलाम कुकुर विकास भएको थियो (NYX), अनलाइन क्यासिनो स्लट लागि एक प्रसिद्ध ब्रान्ड नाम. तिनीहरूले अनलाइन खेलाडीहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो स्लट खेल अनुभवहरू सिर्जना जो एक नयाँ सहयोगी विभिन्न उन्नत खेल कौशल प्रयोग गरि टोली हो.
यो रंगीन मा स्लट साइट निःशुल्क बोनस तपाईं विभिन्न प्रतीक र विजेता यसको एनिमेसन आनन्द उठाउन सक्छौं. त्यहाँ गुलाबी क्रिस्टल हो, बैजनी व्यक्तिहरूलाई, नीलो क्रिस्टल, को स्लट को आधार प्रतीक रूपमा पहेंलो र हरियो क्रिस्टल. उज्ज्वल पहेंलो क्रिस्टल प्रतीक तपाईं गर्न शीर्ष इनाम तिर्न सक्ने छ 1000 पटक आफ्नो खम्बा. तपाईं एउटा सक्रिय शर्त-बाटोमा यी पाँच भूमि व्यवस्थापन भने त्यो सम्भव छ. गर्न मार्फत ace 10 प्ले को कार्ड कम तिर्ने वर्गमा यहाँ बन्न. त्यहाँ रातो-पहेंलो क्रिस्टल को प्रतीक र पुन स्पिन प्रतीक द्वारा सक्रिय छन् दुई बोनस सुविधाहरू छन्.
जंगली बोनस: पहेलो-रातो प्रतीक यस को जंगली सुविधा छ स्लट साइट निःशुल्क बोनस खेल. यो सबै प्रतीक प्रतिस्थापन र प्रत्येक अवतरण गर्ने रील ढाक्न विस्तार. त्यसैले यो सुविधाले तपाईंलाई उन्नत जीत संयोजन मार्फत ती ठूलो पुरस्कार जित्न मदत गर्छ.
Free Spins: कुनै यो खेल मा नि: शुल्क spins संख्या तोकेका छन्. तर तपाईं असफल प्रत्येक समय एक विजेता संयोजन प्राप्त गर्न, को पुन स्पिन सुविधा रूपबाट. यो रील तपाईं संयोजन देखि जीत समय सम्म कताई राख्न मतलब. मूलतः, तपाईं spins हरेक wagering संग जीत प्रत्याभूति प्राप्त.
आश्चर्यजनक दृश्यहरू र एक अद्वितीय विषय संग, यो स्लट साइट निःशुल्क बोनस खेल श्रेणी मा सबै भन्दा राम्रो छ. प्लेयर गर्न फिर्ती यहाँ छ 95.01%.